News - [Ihe ngosi ohuru ohuru] Igwe ikuku nwere ọgụgụ isi nwere ihe jikọrọ ọnụ na nchọpụta ikuku gas na nchọpụta vidiyo, yana ọrụ 4G bulite
[Ihe ngosi ohuru ohuru] Igwe ikuku nwere ọgụgụ isi nwere ikuku na-ejikọ ọtụtụ nchọpụta gas na nchọpụta vidiyo, yana ọrụ 4G bulite
Dabere na ọnụ ọgụgụ na-ezughị ezu, ọtụtụ ihe mberede ọkụ ọkụ na-akpata site na ikuku gas. Ọ bụrụ na achọpụta ọhụụ ahụ tupu oge eruo, enwere ike iwepụ ihe egwu dị na nzuzo n'oge. Tụkwasị na nke a, ịmịpụ gas ga-emebi mmebi ikuku, nke na-ewe oge ma na-agwụ ike iji jikwaa.
Dabere na nke a, onye nchọpụta gas aghọwo otu n'ime ngwa ndị a na-ejikarị eme ihe na mmepụta ihe, nke nwere ike ịchọpụta nchikọta nke ihe ndị na-egbu egbu na ihe egwu, yana nwekwara ike ịchọpụta ụdị gas dị na gburugburu ebe obibi, ma were usoro nnapụta kwekọrọ na ya nsonaazụ nchọpụta.
N'okpuru ọnọdụ nkịtị, ndị na - achọpụta gas na - achọta leaks site na ịchọpụta ikuku gas na akara nke akụrụngwa ahụ, mana n'ihi ụfọdụ ebumnuche ma ọ bụ nchebara echiche, ụfọdụ akara akara siri ike ịchọpụta. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ebe akara akara ahụ karịrị ihe ndị nyocha ahụ ga-erute, na ebe akara ahụ dị na mpaghara dị egwu, ihe mgbochi dị iche iche na-egbu oge ọganihu nnapụta. N'oge a, achọrọ ihe ikuku ikuku nwere ọgụgụ isi!
Igwefoto iR119P wireless nwere ọgụgụ isi gas (nke a na-akpọzi onye nyocha) nwere ike n'otu oge ma na-aga n'ihu na-achọpụta ma na-egosipụta ịta nke methane CH4, oxygen O2, carbon monoxide CO, hydrogen sulfide H2S na sọlfọ dioxide SO2. Ihe anakọtara data gas na gburugburu ebe obibi data dịka ọnọdụ okpomọkụ, ọnọdụ ngwaọrụ, na ọdịyo na vidiyo dị ndụ ka ebugoro na ikpo okwu site na nnyefe 4G maka njikwa ikuku.
Ileba anya nakweere ụdị ọdịdị ọhụụ, mara mma ma na-adịgide adịgide. Na oke mkpu ọrụ, ozugbo data anakọtara gafere oke, ngwaọrụ ahụ ga-agbanye vibration na ụda na ọkụ ọkụ ma bulite data ahụ n'elu ikpo okwu n'oge a. Ngwaahịa a nwere ike bulite ozi nlekota na nlekota nke ọtụtụ ndị nchọpụta, ma mepụta usoro nlekota na nlekota usoro dị iche iche maka ebe ọrụ pụrụ iche, ma kwado 256G kaadị ebe nchekwa iji chekwaa vidiyo arụmọrụ na saịtị.
Gas Nchọpụta gas dị oke mkpa: Ndị ọrụ nọ na saịtị na-ebu ngwá ọrụ ahụ nwere ike ikpebi ma gburugburu gburugburu dị mma dịka ozi ikuku gas nke ngwaọrụ ahụ gosipụtara, iji chebe ndụ na ihe onwunwe nke ndị ọrụ ahụ.
Sound -da oke ụda na ụda ọkụ: Mgbe akụrụngwa ahụ chọpụtara na gas ikuku karịrị ụkpụrụ ahụ, ọ ga-ada ụda ozugbo ma gbaa mkpu iji chetara ndị ọrụ nọ na saịtị ka ha pụọ ​​n'oge.
A-concentrationkwụ ụdọ gas: na-adọta usoro ntinye gas na-akpaghị aka dabere na ozi nchọpụta, na-ele mgbanwe ikuku gas na oge, ma nye data dị ike maka ịkọ ọdịnihu nke ihe mberede tupu oge eruo.
Transmission Ntinye 4G na ọnọdụ GPS: bulite data anakọtara na ọnọdụ GPS na PC, na ọkwa elu na-enyocha ọnọdụ saịtị na oge.
A otutu ihe eji eme ihe otutu: Onye nyocha bu IP67 uzuzu uzuzu na mmiri na-achoghi mmiri, nke kwesiri ka odi na otutu oge di egwu